१० वर्षयता निरन्तर तेस्रो बजेट ल्याउने भाग्यमानी अर्थमन्त्री खतिवडा - Arthakoartha.com
१० वर्षयता निरन्तर तेस्रो बजेट ल्याउने भाग्यमानी अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं, २८ बैशाख । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ । कोरोना माहामारीकैबीच निर्धारित समयमै बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रालयले गृहकार्य तीब्र बनाएको छ।
गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिबेशनमा आइतबारदेखि प्रि–बजेट छलफल सुरु भएको छ । प्रि–बजेट छलफल सकेपछि जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ल्याउन लागेको यो तेस्रो बजेट हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तेस्रो पटक आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्ने छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ र २०७६÷०७७ को बजेट पनि खतिवडाले नै ल्याएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा उनले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । त्यस्तै २०७६÷०७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ३२ अर्व रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संकटका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेकाले आकार केही घट्ने अनुमान गरिएको छ।
योसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा पछिल्लो १० वर्षयता निरन्तर तेस्रो पटक बजेट ल्याउने पहिलो भाग्मानी अर्थमन्त्री बनेका छन् ।
उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै गत फागुन २० अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । तर त्यसको भोलीपल्टै अर्थात फागुन २१ गते पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्ती पाए ।
संघीय संसदको सदस्य नभएपनि मन्त्री बन्न सक्ने संबैधानिक प्रावधान अनुसार उनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । उक्त व्यवस्था अनुसार भदौं (६ महिना) सम्म खतिवडाले कुनै पनि सदनको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छैन । तर ६ महिनापछि मन्त्री हुनका लागि संसदको सदस्य हुनुपर्ने छ ।
बामदेवको बाटो मोडिदा खतिवडा सुरक्षित
मन्त्री खतिवडा वा नेकपाका नेता बामदेव गौतम मध्ये कसलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने भन्ने पार्टी भित्रको बिवादले राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त हुन सकेको छैन । यद्यपी केही समय अघिको नेकपा सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा ल्याउने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय सभामा खतिवडाले नै निरन्तरता पाउने निश्चित जस्तै बनेको छ ।
उसो त यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा खतिवडालाई नै सिफारिस गर्ने मनसाय देखाएका थिए ।
कहिले कसले ल्याए बजेट
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन पश्चात १३ जना अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरे । आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ मा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट ल्याएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ डा. बावुराम भट्टराई, २०६६÷६७ सुरेन्द्र पाण्डे, र आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ भरतमोहन अधिकारीले बजेट ल्याएका थिए ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९÷७० वर्षमान पुन र आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट पेश गरे । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्नको लागि गठन भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रीपरिसद्का अर्थमन्त्री कोइरालाले योजना आयोगको हर्क गुरुङ हलबाट बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट पेश गर्ने अवसर पुन डा.महतले नै पाए । त्यसपश्चात २०७३÷७४ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेका थिए ।
एनआईबीएल सहभागिता फन्डको इकाइ विद्युतीय प्रणाली मार्फत विक्री गर्न सकिने
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीका समस्याबारे गम्भीर छु : उद्योगमन्त्री भट्ट